Tao anatin’ny telo volana : 1.600 ireo vehivavy niharan’ny herisetra | NewsMada
Nomarihina, omaly, ny Andro ho an’ny vevivavy afrikanina. Araka ny tatitra nataon’ ny minisitry ny Mponina, i Naharimamy Lucien Irmah fa nihamaro ny herisetra mian­jady amin’ny vehivavy ao an-tokantrano amin’izao fotoan’ ny fihibohana izao. Nanom­boka ny volana avrily hatramin’ny jolay teo, nahatratra 1600 ireo vehivavy niharan’ny herisetra voaray tamin’ny laharana maitso 813. Vehivavy eo anelanelan’ ny 20 ka hatramin’ny 40 taona avokoa ny 85% amin’izany.
Midika izany fa miaina ao anatin’ny tsy fanajana ny zon’ ny vehivavy isika eto Madaga­sikara. Maro ireo tsy manana ny fizakan-tena ka mora iha­ran’ny herisetra. Maro ny fa­hazarana sy fomba mamam-panao tsy manome lanja ny vehivavy, manomboka any am-bohoka hatreny amin’ny fiarahamonina…
Matetika ampanambadiana mialoha ny vehivavy ary hajanona aloha amin’ny fianarana ka lasa mpanompo izy rehefa tonga eo amin’ny tokantrano. Tokony hotezaina hitovy zo ny zanaka fa tsy misy tombo sy hala na lahy na vavy.
Tezaina amin’ny fikarakarana tokantrano ihany koa ny ankizilahikely ka ho afaka ha­nampy ny vadiny. Ampiana­rina hahay hizaka tena ihany koa ny vehivavy ka ho lasa ve­hivavy mandray anjara amin’ ny famelomana.
Voaraikitra ao anatin’ny velirano fahavalo fanambin’ny filoham-pirenena ny fandrai­sana anjara amin’ny hanohanana ny vehivavy . Nanaiky ny tenany, hanampy tosika ny ve­hivavy mba handray anjara feno amin’ny fampandrosoana
Fifaninanana ho an’ny fikambanana
Lohahevitry ny fanamarihana izao Andron’ny vehi­vavy afrikanina izao ny hoe: “Vehi­vavy mizaka tena no antoky ny fampandrosoana”. Misy ny fifaninana misokatra amin’ny fikambanam-behivavy rehetra amin’ny sehatra maro, ny jono, ny asa tanana, ny fanodinana akora… Tanjona amin’izany ny hanampy sy hanome tosika ny tetikasa mba hahatonga ireo mpikambana hizaka tena amin’ ny fampandrosoana .
Nisokatra omaly 31 jolay hatramin’ny 11 septambra ny fandraisana anjara amin’izany.